Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedyadda oo iska kaashan doonaan La-dagaalanka Alshabaab | BanaadirTimes.com
Dowladda Federalka iyo Maamul-gobaleedyadda oo iska kaashan doonaan La-dagaalanka Alshabaab
Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM ugu qaabilsan Arrimaha dalka Somalia, Nicholas Kay ayaa sheegay inuu weli walaac ka muujinayo xaalladda ammaanka ee dalka Somalia iyo cabsida ay Alshabaab ku hayaan dalalka Gobalka.
Nicholas Kay ayaa lagu wadaa inuu waqti dambe oo maanta hadal ka jeediyo Golaha Ammaanka ee QM ayaa waxa uu khudbad faahfaahsan shalay ka jeediyey Shirka Madaxda Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika ku yeesheen caasimadda dalka Ethiopia ee Addis Abebab.
Waxa uu xusay inay Alshabaab cabsi baahsan ku hayaan dalalka Gobalka, isagoo tusaale u soo qaatay weerarkii ay Dagaalamayaasha Alshabaab bishii hore ku weerareen Jaamacadda Garissa ee W/bari ee dalka Kenya.
Ergayga waxa uu rajo ka muujiyey in isbuucyadda soo socda la arki doono Iskaashi dhow oo xubnaha Dowladaha ka yeeshaan cabsida laga qabo Alshabaab iyo in laga hortago dagaalladda waxa uu ugu yeeray Xagjirnimadda.
Ergayga waxa uu qiray inay Alshabaab weli khatar yihiin, gaar ahaan xilliyaddan aan dheeli-tirnayn, wuxuuna ugu baaqay AMISOM iyo Ciiddanka DFS inay dardargeliyaan dagaalladda ay kula jiraan Dagaalamayaasha Alshabaab.
“Laga bilaabo xilligan ilaa sannadka soo socda, Alshabaab waxay samayn doonaan fal kasta oo ay ku carqaladeyn karaan horumarka Siyaasadeed ee Somalia, waxayna beegsan doonaan DFS, Mamaul-gobaleedyadda, Xarumaha QM, Midowga Afrika iyo Xarumaha kale” ayuu yiri Nicholas Kay
Dhinaca kale, waxa uu ka hadlay qorshaha Dowladda Federalka ee Guulwade, kaasi oo lagu doonayo in lagu tababaro, laguna qalabeeyo Ciiddanka Dowladda si ay ugu biiraan Hawlgalladda Wadajirka ee lagula dagaalamayo Alshabaab.